Isitshayina Abafazi: Kuhlangana Zinokuphathwa Isitshayina Abafazi ngomhla Omnye Umntu Ukuhamba
Budlelwane nabanye phakathi Western abantu kwaye Isitshayina abafazi ingaba eba ngaphezulu ethandwa kakhulu ngalo mhla. Abafazi kwi-China ingaba ethandwa kakhulu ngenxa yabo beautiful ikhangeleka ngokunjalo zabo ezilungileyo uphawu. Ukuba akunjalo, abantu abaqhelekileyo ngezi abafazi, apha ke eliphantsi phantsi kuyo yonke ufuna ukwazi malunga beautiful Isitshayina abafazi. Uninzi Isitshayina girls ingaba icimile kwaye kuba ngaphezulu agciniwe personality. Isitshayina ladies bamele kanjalo ngakumbi zomthonyama, kwaye conservative kuthelekiswa abafazi ezivela kwezinye iingingqi ehlabathini. Baya rhoqo bakholisa ukunika impression ukuba bamele ngaphantsi uqinisekile nangona kunjalo, kwesinye isandla ngabo iselwa elizimeleyo.
Baye ingaba kanjalo kakhulu ukuba neentloni kwaye ndiya rhoqo ncuma okanye giggle xa elinovakalelo ngokulawulwa usesinye lixoxiwe okanye ukuba baye bazive embarrassed okanye uncomfortable. Ezi abafazi bamele kanjalo trustworthy kakhulu devoted yabo partners. Isitshayina abafazi ingaba elimnandi kakhulu kwaye exhibit iselwa i-oriental comment. Uninzi abafazi kuba petite imizimba, zayo elide omnyama iinwele, i-oval ubuso, large brown amehlo kunye kabini-umhlambi okanye crease kwi-eyelids, pronounced bridge ye-nose, kwaye ingaba iselwa elifutshane. Isitshayina ladies bamele kanjalo kakhulu nabafana kuthelekiswa abafazi ezivela kwezinye iindawo ehlabathini, baza bahlala youthful nkqu kwi old age. Kubaluleke kakhulu ngokufanayo ukufumana abafazi kwi-China abakhoyo zabo s kodwa jonga ngathi ngabo. Sexy Isitshayina abafazi kuba sweet kwaye serene amazwi abo ukuze enze abantu craze kuba nabo. Xa ufumana u’a Isitshayina girlfriend buza wakhe ukuba uthetho olusezantsi into mnandi kweyakho iindlebe, uya kwenza kuwe buthathaka ngomhla ngamodolo akhe, literally.
Dining etiquette kakhulu kubalulekile ukuba Isitshayina. Kodwa izinto ezifana njani ukuba kuziphatha ngomhla dining itheyibhile okanye usebenzisa chopsticks ngokuchanekileyo kuya kubonisa ukuba usapho ka-umfazi ngathi wena okanye hayi. Ukuba ufuna ukuya kuhlangana abafazi kwi-i-lula kwaye affordable indlela sizame Isitshayina dating zephondo. Ezinjalo ziza yenza ukuba ezisebenza nge-s yabasetyhini ukususela novuselelo yakho ngexesha kakhulu cheap iindleko. Zonke kufuneka ube yi computer-intanethi udibaniso. Ukuba waphumelela-intanethi ezisebenza nge njengoko abaninzi abafazi kaninzi kangangoko unako. Ukuba ufuna ukujonga kuhlangana Isitshayina ladies, ngoko sikhuthaza ukuzama China Ividiyo Dating okanye Asian umhla. Kukho abo kuthi abo bakhetha kuhlangana abafazi ubuso ngobuso. Ukuba ufuna abanjalo uhlobo umntu kwaye ufuna ukuya kuhlangana a real authentic Isitshayina elonyuliweyo, kucetyiswa ukuba yiya China kwaye ezisebenza kunye abafazi apho. Interacting kunye umfazi yayo ekhaya lizwe kanjalo oninika i-invaluable ithuba uvela kuye inkcubeko. Ukuba akunjalo, anomdla ikhangela Isitshayina ladies abahlala ngaphesheya eyona ndawo ukuba badibane nabo kwi-umntu kwi-ngu wobulali iziganeko ukuba ingaba kusenokwenzeka ukuba ukutsala Isitshayina abafazi. Khangela ngaphandle wobulali listings ukufumana ngaphandle apho iziganeko ezinjalo ingaba kwaye uzame kuzimasa njengoko abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Ukuba ufuna umhla a Isitshayina umfazi, impumelelo yakho iya kubonelelwa yi-njani ngoko uyayazi yakhe. Get ukuqonda yakho umfazi xa usazi zinto zilandelayo malunga yakhe. Xa ke iza budlelwane nabanye bonke ukuba abafazi kwi-China ufuna kukuba umntu lowo uza kuba noxanduva kwaye abo baya kuba ethanda uzimisele budlelwane. Ngenxa uhlobo kushicilelo kwi-China, ikakhulu abantu ngokulula ufuna itshata umfazi ngenxa yokuba yena ngu ukusuka ekunene usapho. Abafazi ingaba ke ngoko ezama ubudlelwane abavela kumazwe angaphandle amadoda abo baya kunikela kwabo uthando lokwenene. Isitshayina ladies ingaba kokukhona conservative malunga ngesondo njengoko kuthelekiswa Western abafazi. Baya kuba kakhulu reluctant bathethe kwi-ukwabelana ngesondo nendoda ukuba abakho ukuqinisekisa ukuba nguye ezilungele umntu kuba nabo. Isitshayina abafazi sebenzisa ngesondo njengoko i-intetho ka-uthando kwaye ndiya ke ngoko bakhetha kuba intimate kunye umntu ngabo kwi-elide ubudlelwane kunye. Umtshato kakhulu ebalulekileyo abaninzi Isitshayina ladies. I-imithetho bamele kanjalo igcine kwi phezulu athathe ngenxa kwi-China kubalulekile bakholelwa ukuba xa itshata umntu, unoxanduva marrying kwi-i-lonke usapho kwaye hayi nje marrying umntu. Kubalulekile kananjalo ezenzeka amanqaku kwi-China kuba umfazi ukuhlala kunye umyeni ke usapho emva umtshato. Isitshayina ladies thatha umtshato kakhulu seriously kwaye wokuqhawula umtshato ngu ngokuqhelekileyo na ingxelo ukhetho kuba nabo. Abaninzi amadoda nabafazi kwi-China kwakhona cinga wokuqhawula umtshato ngu shameful kwaye ukuba yesibini marriages akufanele entertained. Nkqu nokuba ngu-China kujike adopting Entshona-koloni inkcubeko, esiqhelekileyo usapho ubume ingu highly valued kwaye iphethe ngabemi indawo kwi-Isitshayina inkcubeko. I-Isitshayina usapho sicinezela kwi-uthando kwaye phezulu morals phakathi amalungu osapho. Traditionally abafazi, kulindeleke ukuba hlala ekhaya kwaye zikhathalele ekhaya, abantwana, nakwi-usapho. Abaninzi bale mihla Isitshayina abafazi kuba careers, kodwa ke kwakhona kukho zesixeko ka-emakhayeni abo. Imfundo yeyona highly valued kwi-China kwaye kweli lizwe sele phakathi ephezulu nokubhala amanqanaba ehlabathini. Abo bamele highly educated ingaba highly respected kwi-zoluntu. Kunye amadoda nabafazi kwi-China kuba excelled kwi-respected omkhosi ezifana sciences namachiza. Isitshayina ladies bazimisele ukusebenza nzima kwaye ngaphandle kwemali. Abo bakholisa ukuba worry malunga namhlanje kunokuba bonwabele namhlanje. Bamele kanjalo ethengisela ngexesha elinye inqanaba njengoko zabo indoda counterparts kwi-career ngaphambili.
Ezona indigenous inkolo kwi-China ngu Confucianism
Kubalulekile umphefumlo ye-Isitshayina inkcubeko kunye isiseko indlela abantu kuziphatha. Bale mihla mini iinkolo kwi-China ziquka Buddhism apho lelona ethandwa kakhulu inkolo yalandelwa Christianity. Kukho abancinane umahluko phakathi Isitshayina inkcubeko kunye wecawe. Ngoko ke, kubalulekile ukuthatha inzala kwi-inkolo ka-umfazi ufuna ukufumana ezinzima kunye ngenxa yokuba kuya kwalatha uhlobo iindlela ezilungileyo ukuba yena ukholwayo elizwini. Ithetha ntoni yena ingaba kuba fun? Isitshayina abafazi uthando ndihamba kuba uhamba phezu kwaye abebezimase umhleli wencoko yababininame iiseshoni? I-Isitshayina ngokwenene uthando ecula, kwaye ezininzi zixhomekeke kakhulu ezilungileyo ku-oko. Dress phezulu kwaye ukufunda i-Isitshayina dining etiquette. Isitshayina bakholisa ukuba abe kakhulu kulandelwe kwaye baya ukulindela ukuba wonke umntu ukulandela isuti. Funda malunga Isitshayina cuisine njani ukusebenzisa chopsticks. Nanini na xa uthatha Isitshayina elonyuliweyo ngaphandle kumhla e a restaurant ukuqinisekisa ukuba ngaba ukuziqhelisa le Isitshayina dining imigaqo, kubekho inkqubela kunye kuba super impressed ukuba uyazi njani ukusebenzisa chopsticks ngokuchanekileyo. Ukugcina Isitshayina elonyuliweyo anomdla rhoqo kuba into kwakucwangcisiwe ukuba ababini ungayenza kunye. Xa elonyuliweyo nisolko anomdla ubona nisolko kusoloko esenza into yena uya kufumana oko intriguing. Get ukwazi abantu yena seliza kunye ezifana yakhe osapho kunye nabahlobo. Ekubeni nako ukungena kwi-umfazi ke usapho kunye namaqonga isangqa kakhulu kubalulekile ukuba ufuna umfazi ukuba benze kuni. Kuba polite kwaye eyobuhlobo kuye usapho nabahlobo kwaye bonisa wakhe ukuba ufuna ngokwenene anomdla kuzo. Funda malunga yakhe inkcubeko kunye musa alenze ukuba nje ngenxa yokuba yena ngu Asian yakhe inkcubeko lufana zonke ezinye Asian uluntu. Ukuba kukho imiba yakhe imikhuba okanye inkcubeko ukuba ukhe ubene hayi abantu abaqhelekileyo kunye, buza yakhe malunga nabo ukuqonda yakhe ngcono. Kukho sihamba ngoku ukulungele umhla Isitshayina abafazi kwaye uyakwazi confidently qala yakho ngempumelelo ukukhangela enye
← Apho Ukufumana Isitshayina Abafazi kuba Umtshato - Ngamazwe Dating Ingcebiso kuba Abantu Ezama Langaphandle Brides
Free china-Intanethi Incoko Amagumbi, i-Intanethi Incoko zephondo →
© 2020 Ividiyo incoko yeChina